Kaaliyaha guriga - SmartMe
Dom » Kaaliyaha Hoyga
Iyadoo aan loo eegin inaad ku bilooneysid halistaada Kaaliyaha Guriga ama aad tahay isticmaale khibrad leh, waa inaad la socotaa qalab cusub. Waxaad ka heli doontaa maqaalo kala duwan oo ku saabsan aaladaha aad ku biirin karto otomaatiga guriga. Akhriso oo diyaarso sidaad jeceshahay!
Maanta waxoogaa waan ka shiraacannay gawaarida korantada ilaa xashiishka xariifka ah 😉 Laakiin sidoo kale waxaan wax u haynaa taageerayaasha nidaamka deegaanka! Adigana dhinicii aad tahay HomeKit ama Kaaliyaha Guriga? 😀